किड्नीलाइ स्वस्थ राख्न यी घरेलु उपाय अप्नाउनुहोस् ! - VOICE OF NEPAL
किड्नीलाइ स्वस्थ राख्न यी घरेलु उपाय अप्नाउनुहोस् !
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार ०८:२६
पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा अस्पतालका संख्या बृद्धि भएसँगै अस्पतालहरुमा विरामीको चाप पनि बढ्दो क्रममा छ । तपाई नेपालका जुनसुकै अस्पतालमा जानुहोस् त्यहाँ अनेक प्रकारका रोगको उपचारका लागि आएका विरामीको अत्याधिक चाह देख्न सक्नुहुन्छ । रोग विशेष अस्पताल र विशेषज्ञ कहाँ पनि उस्तै चाप हुन्छ विरामीको । विरामीको अस्पताल तथा क्लिनीकहरुमा अत्याधिक चाप बढ्नुको मुख्य कारणका रुपमा हामीले दैनिक रुपमा सेवन गर्ने खानेकुरालाई लिन सकिन्छ ।
हामीले दैनिक रुपमा उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थलाई मात्रा मिलाएर खान जान्ने र कुन रोगका लागि कुन खानेकुराले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने बुझेर सावधानी अपनाउने हो भने हामी हाम्रा रोगहरुको घरमै उपचार गर्न सक्छौं ।
विविध रोग मध्ये आज चर्चा गरौं किड्नी सम्बन्धि रोग र घरेलु रुपमा हामीले खानु पर्ने केही खानेकुराको बारेमा । उच्च रक्तचाप र डायबिटिजको रोग हुनेलाई किड्नीसम्बन्धी समस्याले सातउँछ । कारण किड्नीले आफ्नो नियमित काम गर्न सक्दैन । बाहृय अंगलाई सफाई गरे जस्तै शरिरका बिभिन्न भित्री अंगलाई पनि सरसफाइको आवश्यकता हुन्छ ।
हरियो पातयुक्त तरकारी
किड्नीको सफाईका लागि हामीले हाम्रो भोजनमा हरियो पातयुक्त तरकारीलाई समावेश गर्न सक्छौं । हरियो सागसब्जी सम्पूर्ण स्वास्थ्यका हिसाबले निकै राम्रो मानिन्छ । हरियो सब्जीमा भिटामिन सी, र भिटामिन के हुन्छ । यसमा प्रचुर मात्रामा फाईबर हुन्छ । हरियो फातयुक्त सब्जीले रत्तचाप नियन्त्रण गर्नुका साथै ब्लड सुगरको मात्रा घटाउने र किड्नीलाई सम्भावित स्ट्रेसबाट पनि जोगाउछ ।
बेसारमा कुरकुमिन नामक तत्व हुन्छ, जसले शरिरमा हुने जलन तथा उत्तेजना रोक्छ । बेसार किड्नी रोगबिरुद्ध लड्नका लागि पनि सहयोग हुन्छ । रोटी, पुवा, दुध इत्यादिमा बेसार मिलाएर खान सकिन्छ ।
स्याउ हरेक मानिसका लागि गुणकारी फल हो । स्याउमा फाईबरको मात्रा अधिक हुन्छ । जसले शरिरमा अनावश्यक विष शरिरबाट हटाइदिन्छ । किड्नीमा भएका अनावश्यक विकार समेत फालिदिन्छ । स्याउले पाचन प्रणालीलाई पनि सहयोग गर्छ ।
नियमित लसुनको सेबनले किड्नीलाई सफा गरिदिन्छ । लसुनलाई बिहान खाली पेट वा पकाएको परिकारमा मिसाएर खान सकिन्छ ।
जैतुनको तेलले हाम्रो शरिरमा फाईदै फाईदा गर्छ । तर, यसले किड्नीमा विशेष फाईदा गर्छ । जैतुनको तेलले कोलेस्ट्रेल घटाउनुका साथै किड्नीमा हुने स्टोनबाट उत्पन्न पीडाबाट आराम दिन्छ ।
कागती पानीले किड्नीलाई सफा मात्र गर्दैन, किड्नीमा स्टोन हुनबाट जोगाउछ । कागतीको जुसले शरिरमा सिट्रेसको तह बढाउछ, जसका कारण किड्नीमा स्टोन हुनबाट जोगाउछ । दैनिक एक गिलास कागती पानीले किड्नीलाई स्वस्थ र निरोगी बनाउछ ।
कागतीले जस्तै अदुवाले पनि किड्नी सफा राख्छ । अदुवालाई धुलो, जुस वा खानेकुरामा मिसाएर खान सकिन्छ । किड्नीलाई सम्भावित ड्यामेज हुनबाट जोगाउँछ ।
‘कोरोनाको जटिल अवस्थाबाट बच्न मोटोपना घटाउन चिकित्सकको सुझाव
सास गन्हाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी पाँच घरेलु तरिका !
सर्वाधिक लोकप्रिय पेय कोकाकोलाको यस्तो छ जन्म कुण्डली !
संक्रमितको संख्या किन उस्तै अंकमा छ ? डा. रवीन्द्र पाण्डे
रामदेवको ‘कोरोनाविरुद्धको औषधि’ को प्रचारप्रसारमा भारतले लगायो रोक
कोरोना खोप आउन साढे दुई बर्ष लाग्न सक्छ : डब्ल्युएचओ
अनुमति बिना काठमाडाै‌ं प्रवेश गर्न खाेज्ने ७ हजार बढी सवारी साधन नाकाबाटै फिर्ता
नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ७६ पुग्यो
प्रचण्ड होम क्वारेन्टाइनमा
रामको जन्मभूमि माडी नै हो, भब्य मन्दिर बनाउनुस्, अर्को दशैंमा सीतारामको मूर्ति उदघाटन गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्ता ईः अनसन तोड्दै, सरकारसँग सम्झाैताकाे तयारी
सन्तोष लामाको ‘डर छैन’मा विपिन को अब्बल अभिनय (भिडियो)